Tag: musika | Martech Zone
China, May 13, 2021 China, May 13, 2021 Douglas Karr
Makambani ari kunyura mune dhata iyo inoungana muCRM yavo, kushambadzira otomatiki, ERP, uye mamwe makore data sosi. Kana zvikwata zvakakosha zvekushanda zvikatadza kubvumirana kuti ndeipi data inomiririra chokwadi, mashandiro acho anomiswa uye zvinangwa zvemari zvinonetsa kuwana. Syncari inoda kuita kuti hupenyu huve nyore kune vanhu vanoshanda mukushambadzira ops, maops ekutengesa, uye maops emari anoramba achinetseka nedhata achipinda munzira yekuzadzisa zvinangwa zvavo. Syncari inotora nyowani
Dzimwe nguva, inowanzo kuve yakapusa kuita mabasa anokonzeresa vagadziri vewebhu iwo makuru misoro. Imwe yeiyo iri nyore Wedzera kuKarenda bhatani iwe raunowana pane akawanda masayiti anoshanda pane akakosha khalenda zvirongwa online uye kuburikidza nedesktop application. Muhungwaru hwavo husingaperi, mapuratifomu akakosha ekarenda haana kubvira abvumirana pane zvakajairwa kugovera ruzivo rwechiitiko; semhedzisiro, khalendari huru imwe neimwe ine maitiro ayo Apple neMicrosoft yakagamuchira .ics mafaera se
Nepo vashambadziri vachiwanzoshanda kuburitsa zvemukati izvo zvese zvinovasiyanisa uye zvichitsanangura zvakanakira zvigadzirwa zvavo nemasevhisi, ivo vanowanzopotsa mucherechedzo pakuburitsa zvemukati zvemarudzi ese emunhu ari kutenga chigadzirwa chavo kana sevhisi. Semuenzaniso, kana tarisiro yako iri kutsvaga sevhisi nyowani yekushandira, mushambadzi anotarisana nekutsvaga uye shanduko dzinogona kutariswa mukuita nepo mutungamiriri weIT angave akatarisa pazvinhu zvekuchengetedza. Zviri
Chili Piper: Kugadzirisazve Yako Yekutengesa Chikwata Kuronga, Karenda, Uye Inbox
Chili Piper inogadziriswa yekugadzirisa mhinduro iyo inoita kuti iwe ugone kukodzera, nzira, uye bhuku misangano yekutengesa ine inbound inotungamira iyo nguva yavanoshandura pawebhusaiti yako. Sei Chili Piper Inobatsira Kutengesa Matimu Pasina kuvhiringidza kutungamira kwekuparadzira maspredishiti, hapasisina kumashure-uye-mberi maemail uye voicemails kungo gadzirira musangano, uye hapasisina mikana yakarasika nekuda kwekunonoka kutevera. Chili Piper Zvimiro Zvinosanganisira Chili Piper inopa yako tarisiro neiri nani kuronga chiitiko che